Ciidamada Dowladda oo Toogtay wiil dhalinyara ah.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada ka haaya dhismaha ka socda wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa ay Barqanimadii saaka toogasho ku dileen Wiil Dhalinyaro ahaa.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay xaqeejiyeen in mid kamid ah askarta uu toogtay Wiilka dhalinyarada ahaa,isla markaana uu goobta ka baxsaday,waxaana goobta tegay ehellada Wiilka la dilay, iyaga oo meydka halkaasi kasoo qaaday.
« Wafdi Hor leh oo maanta ku wajahan Dhuusamareeb.
Gudoomiyaha Gobalka Hiiraan oo beeniyay in dameer uu sababay Shilkii diyaaradeed. »